FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MASTWEILER ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Mastweiler anglisy
Mastiff / Rottweiler Mix Dogs miteraka
Prince the English Mastweiler amin'ny 3 taona sy 6 volana— 'Mavesatra mihoatra ny 100 pounds izy, saingy heveriko fa efa nitombo izy tamin'ny farany. Nandany ny ankamaroan'ny androny i Prince tamin'ny fihazonana ahy niaraka tamin'ny fanenjehana sy ny fanenjehana ny zanak'anabaviko 2 taona, izay manizingizina fa alika ny Prince. '
Ny alika Mastweiler anglisy dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mastiff ary ny Rottweiler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Prince dia 90-pounds. Fifangaroana English Mastiff / Rottweiler. Manodidina ny 2 taona eo amin'ity sary ity izy ary tiany ny mitoby ary mandeha mitsangatsangana miaraka amiko sy ny fianakaviako. Izy no fitambarana alika malemy fanahy sy mpiaro tsy misy tahotra. '
'Aries io. Mastweiler anglisy izy ary ireto no sary nalaiko taminy 2 1/2 volana. Ankizivavy kely milamina sy te hahafanta-javatra izy ary tia miaraka amin'ny olony fotsiny. Manana fotoana izay hieritreretan'ny olona fa tsy afaka nipetraka mangina mihitsy izy, mamorona hazakazaka hazakazaka ivelan'ny trano ary ny fandefasana seza fandriana, na izany aza dia mandeha haingana be ireo fotoana ireo ary maharitra iray na roa minitra fotsiny, tsy lazaina intsony fa lasa mihamarefo izy ireo rehefa mitombo sy mianatra i Aries. Izy dia zazakely marary sy be fitiavana amin'ny zanakay lahy 17 volana ary nahita ny toerana potipotiky ny cookie, manaraka azy eran'ny trano manadio azy. Aries dia alika entin'ny sakafo, na dia tiany aza ny kilalaony, dia tsy alika mitazona ihany koa izy na kilalao na sakafo. Hitako fa i Aries, na dia mafy loha aza, dia mianatra haingana ary tsara ny fihetsiny amin'ny a tony sy matoky tompony . Tiany ny mandeha an-tongotra miaraka amin'ny fianakaviana ary mifanerasera tsara amin'ny alika hafa. Misaotra ny fikarakarana alika kely alika ny fahaizany ara-tsosialy tonga mahafinaritra. Mbola manana asa hifandraisany aminy isika fa ny Aires amin'ny ankapobeny dia alika mahay mandanjalanja izay mifanaraka tsara amin'ny fianakaviana. '
Racket the Mastiff x Rottweiler mix dog (anglisy Mastweiler) amin'ny 2 taona— 'Racket dia avy amin'ny fandaharanasa fananahana voaomana tsara. Andiana mpiompy ao Birmingham, UK, no niompy alika ho an'ny tafika, polisy ary ny asa fiarovana. Heveriko fa ity no zanak'alika zanak'alika fahatelo avy amin'ny fiompiana anglisy Mastiff x Rottweiler. Ny Rotties dia kely, be alemà ary be fiofanana. Racket dia hazo fijaliana ho an'ny taranaka fahatelo na fahefatra raha ny azoko atao hanangonana ilay mpiompy dia manana firaketana tsara ary nasehony ahy ny sarin'ny mpianakavy izay tsy teo amin'ny tranobeny. Ny tanjon'izy ireo dia ny hiteraka alika iray izay toa Mastiff kely saingy mifanaraka amin'ny fiainana miasa, na amin'ny fomba fijery ara-pahasalamana na ara-toetra. Misy iray Neapolitan Mastiff ao ambadika any - raibe iray izay inoako, na angamba raibe - ary izy no tokony ho nampiasaina fa tsy Mastiff anglisy. Nofaritan'ny mpiompy ho 'Mastiff x Rottweiler' izy ireo noho io antony io, saingy nohamafisiko taminy fa ny mastast anglisy rehetra no nampiasain'ny Mastiff hafa fa tsy Bullmastiff sns. Ny reniny sy ny rainy dia samy Mastweiler avokoa, ary ny raibe iray dia Rottie. Ireo mpiompy dia niezaka hitazona fifangaroana 50:50. Izy ireo dia nanamarina ny loko - ny pups dia mivoaka amin'ny brindle mainty, mena na mena - ary ny karazany dia toa nitovy ihany koa, saingy nisy fahasamihafana lehibe tao amin'ny fako hita fa salama daholo ny pups, saingy manodidina ny 12 alika kely, lahy roa lehibe kokoa noho ny sasany. '
'Na eo aza ny fiainany henjana, tovovavy mahafinaritra i Racket. Soppy be izy ary, 2 taona, mbola mieritreritra fa alika kely mahafatifaty. Izy dia olona mitady saina, maniry mafy hampifaly ny ankizy. Tena sariaka izy rehefa ampahafantarina olona, ​​saingy alika fanairana. Miaro ahy izy ary mijoro eo alohako, nipoitra ny hackles, raha heveriny fa misy fandrahonana. Raha mandre feo tezitra sy mampiakatra izy dia lasa mailo ary manomboka miambina. Nihalehibe izy niaraka tamin'ny English Bull Terrier antsika ary mifankatia izy ireo, na dia mankafy lalao milay koa aza. Miorina eo amin'ny 25 '(64 cm) ny haavony eo amin'ny soroka ary milanja 110 lbs izy. (50 kg). '
Raketo ny alika Mastiff x Rottweiler anglisy mix dog (English Mastweiler) amin'ny 2 taona
Abby the English Mastweiler amin'ny 1 taona sy 90 pounds— 'Ny dadany dia Rottweiler madio ary ny mamanany dia Mastiff madio.'
Mae the English Mastweiler amin'ny faha-9 volana— 'Ny reniny dia Mastiff anglisy madio ary milanja 110 lbs. ary ny rainy dia Rottweiler namboarina alemanina izay nilanja 100 lbs. Ankehitriny amin'ny herintaona dia efa haavon'ny Rottie mahazatra izy nefa mbola mila mameno kely ihany. Alika mamy tokoa izy ary mivonika daholo. '
Napoleon the English Mastweiler amin'ny 8 volana dia teraka avy amin'ny vehivavy Mastiff sy ny lehilahy Rottweiler.
English Mastweilers Jazzy (havia), ary Napoleon (ankavanana) amin'ny 6 volana dia teraka avy amin'ny vavy Mastiff sy lehilahy Rottweiler.
Alika kely Mastweiler anglisy amin'ny 5 herinandro— 'Amin'ny ankamaroan'ireny alika kely ireny dia hitantsika fa milamina toy ny Mastiff izy ireo, saingy tia mitsangana ary mikororoka toy ny Rottweiler. Ireo alika kely ireo dia avy amin'ny vavy Mastiff sy lahy Rottweiler. '
sisin-tany collie afangaro mpiandry aostraliana
Lisitry ny alika mastiff mifangaro anglisy
Lisitry ny alika mifangaro Rottweiler
afaka mahazo soavaly ve aho?
Chihuahua sy ny alika Weiner Mix
orona manga zanak'alika amerikana pitbull terrier
inona ny alika mpiandry vavahady
rat terrier shih tzu mifangaro
sary an'ny alika omby amerikanina